Maitiro Ekuita Yakakomba Mari Pamhepo? | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Mazuva ano, vanhu vazhinji uye vazhinji varikutsvaga kwekuwedzera sosi yemari nekuita mari paInternet. Izvi zviri nyore kuita nhasi kupfuura zvazvaive makore mashoma apfuura, nekuti kune akawanda mapuratifomu eaya anonzi vafambiuko kwavanogona kuratidza hunyanzvi hwavo.
Ehezve, kune avo vanotowana zviuru zvishoma pamwedzi. Izvo zvese zvinoenderana nehunyanzvi, kuzvishingisa, uye pamusoro pazvose pane hunyanzvi hunofanirwa kuve neanoshanda wega. Makambani anoda kuhaya vanhu vanogona kuita chimwe chinhu.
Iri ndiro rinodaidzwa kuti remahara basa, iro rinosanganisira zviito zvakanangana nekushandisa kugona kwemunhu. Izvi zvinogona kuve, semuenzaniso, zvemakomputa mifananidzo kana chirongwa.
Kunyanya iyo yekupedzisira mhando yebasa inounza mari hombe kwazvo, nekuti pasirese hapachina programmers vanokwanisa, saka kuwanikwa kwehunyanzvi hwakadaro kunokosha kurema kwayo mugoridhe.
Mapurogiramu anowanzo shanda mumahofisi, asi basa rakawanda uye rakawanda rinopihwa nemari yakanaka kwazvo yemubhadharo uye akawanda mabhenefiti munharaunda ave kubuda. Vashandi veIT vanowanzo shandiswa kuti vaite rimwe basa, senge chirongwa chakakosha kana kunyorera.
Hunyanzvi hwechipiri uhwu hwakakosha zvakanyanya nekuti mugadziri anoziva mutauro uyo unobvumidza iwe kuronga chirongwa cheApple, kana zvirinani iOS, anogona kutarisira mhedzisiro yekutsvaga basa mhedzisiro uye mibairo yepamusoro.
Kuisa mari mu cryptocurrencies
Mumakore achangopfuura, pakave nekutaura kwakawanda pamusoro pekuita mari pamhepo pa cryptocurrencies... Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti vamwe vanhu vakawana mari yemuchadenga kubva muzvikwereti, semuenzaniso, mu bitcoins... Nekudaro, zvakakodzera kuti utarise njodzi dzinosanganisirwa neiyi nzira yekuwana.
Makomborero pazvitoro zvepamhepo
Imwe nzira inoshamisa inozivikanwa yekuita mari online kuve neyako online chitoro. Vanenge vese munhu akamboshanda nebhizimusi reinternet akaedza kuvhura yavo yega online chitoro nezvakanaka kana zvakashata mhedzisiro.
Zvisingashamisi, iyo e-commerce musika munyika medu iri kukura nekumhanya chaizvo, uye munguva pfupi izhinji revashandisi vachatengesa chete pamhepo. Rudzi urwu rwekutenga runochengetedza nguva, mari uye tsinga.
Aya mamiriro anoshandiswa zviri nyore nezvitoro zvepamhepo, izvo zvinobuda sehowa mushure memvura. Iwo maindasitiri anozivikanwa kwazvo, ehe, kutengesa zvipfeko, zvemagetsi uye zvekushandisa zvevana. Iyo yekupedzisira, yakapihwa chirongwa chehurumende che500+, vari kutengesa zvakanakisa.
Kwepamhepo chitoro manejimendi
Iyi haisi nzira iri nyore, uye iyi nzira yekuwana mari haina kukodzera kune wese munhu. Zvinosanganisira kuchengetedza zvinhu zvakawanda panguva imwechete - makambani ekugadzirisa, kutumira uye makambani anotakura - pamwe nekuenderera mberi kwekutumira uye maresiti.
Nekudaro, kana chitoro chave kusvika padanho rinodiwa, vashandi vanogona kupihwa basa rekuita rakawanda rebasa. Zvino izvo zvasara ndezvekutevera bhizinesi uye nekuona mamiriro ari kukura eakaundi account.
Posted in Ive nebhizimisi
Mibvunzo ye57 mu database yakagadzirwa mu 0,386 masekondi.